IJografi - Wikipedia
IJografi zizifundo ngeHlabathi nangeempawu zalo, izidalwa ezihlala kulo, kunye nokwenzeka kwalo. Igama elithi jografi livela kumagama esiGrike athi gê ("Umhlaba") kunye nelithigraphein ("ukubhala, ukuzoba"). Lithetha "ukubhala kunye nokuzoba umhlaba". eli gama laqala ukusetyenziswa ngumphandi obizwa ngokuba nguEratosthenes (276-194 B.C.).
Iimpawu zalo zizinto ezifana namazwekazi, iilwandle, imilambo kunye neentaba. Abahlali balo ngabo bonke bantu kunye nezilwanyana ezihlala kulo. Izinto ezenzeka kulo zizinto ezifana namaza omoya, umoya, kunye nenyikima.
Umntu oyingcaphephe kwijografi kuthiwa yijografa. Ijografa izama ukuqonda ngeHlabathi nangezinto ezikulo, zaaqala kanjani zaza zatshintsha njani. 
IJografi yahlulwe yangamacandela amabini elephysical geography nele human geography. KwiPhysical geography kufundwa ngobume bendalo yehlabathi ukanti kwihuman geography kufundwa ngobume boluntu kwihlabathi. Kwizifundo zoluntu lwasemhlabeni kungabandakanywa izinto ezifana noluntuolukwisizwe, Lumi njani uqoqosho lwesizwe, nezinye izinto.
iijografa kufuneka zibenolwazi oluphangaleleyo ngeemephu kuba kaloku iimephu zibaluleke kakhulu kumntu ofuna ukwazi ngejografi. Iijografi zizisebenzisa kakhulu iimephu, zide zizenze nokuzenza ngamaxesha amaninzi. ukwenziwa kwememphu kuthiwa yi''cartografi'', Ngokufanayo, abantu abenza iimephu kuthiwa ziicartografa.
2 Uluntu lwasemhlabeni
3 Amaphepha azalana nale ngxoxo
5 Ezinye iiwebsite
Itropical cyclone off Brazil
Iijografa ezifunda ziphicothe le planethi yasemhlabeni zingaqwalasela oku kulandelayo:
iintshukumo zobushushu ezenzeka kwinzulu yomhlaba
iintshukumo ezenzeka kufutshane nomphezulu womhlaba
Igquba labantu lijikeleze iband.
Iijografa ezifunda ngoluntu lwasemhlabeni lungaqwalasela oku kulandelayo:
Amaphepha azalana nale ngxoxoEdit
igalelo lejografi kupolitiko lwehlabathi
Retrieved from "https://xh.wikipedia.org/w/index.php?title=IJografi&oldid=28248"
Last edited on 11 Eye Dwarha 2017, at 09:29
This page was last edited on 11 Eye Dwarha 2017, at 09:29.